Duqa Muqdisho oo la kulmay Safiirka Midowga Yurub Ee Somaliya - Home somali news leader
Home NEWS Duqa Muqdisho oo la kulmay Safiirka Midowga Yurub Ee Somaliya
Guddoomiye Cumar Finish iyo Safiir Nicolás Berlanga ayaa inta uu kulankooda socday uga wada hadlay arrimo kala duwan oo ay kamid yihiin xoojinta sidii loo dhaqaajin lahaa taageerida mashaariicda kala duwan ee ka socda Caasimadda dalka ee Muqdisho.
Guddoomiyaha Gobolka iyo Safiirka ayaa si gaar ah iskula meel dhigay dhaqaajinta mashaariicda dhaqaalaha, dib-udhiska, iyo xalinta Maareynta Barakacayaasha iyo soo dedejinta shaqooyinka Midowga Yurub ka Wado Soomaaliya.
Kulanka dhexmaray Cumar Maxamud Maxamed (Cumar Filish) iyo safiirka Midowga Yurub ee Soomaaliya ayaa goobjoog ka ahaa xubno ka tisan Maamulka Gobolka Banaadir iyo Mas’uuliyiin kale.
Midawga Yurub ayaa Soomaaliya ka taageera dhinacya badan oo ay kamid tahay tababarrada ciidamada Booliska si sare loogu qaado awoodda iyo xirfadda sugidda amniga Shacabka Soomaaliyeed.
Previous articleRa’iisul Wasaare Rooble oo dib ugu soo laabtay Muqdisho
Next articleFrench companies see new ways to drive sales